ပိုမိုလုံျခဳံတဲ့ facebook account ျဖစ္ေအာင္
စဆရက လုပ်ဖို့ လျှောက်ရေးထားတာ အားမှ အပျင်းပြေ ဖတ်ပါ...
Password တွေကို ခန့်မှန်းရခက်တဲ့ password များထားပါ။
Password ပေးတဲ့ နေရာမှာ အလွယ်တကူ ခန့်မှန်းလို့ရတဲ့ မွေးနေ့၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ ကိုယ့်နာမည်၊ ချစ်သူနာမည်ပေးတာမျိုးတွေ ရှောင်ရှားပါ။ ဥပမာ - 11111111, 12345678
Password ပေးတဲ့အခါ ခန့်မှန်းရခက်တဲ့ စကာလုံးများ၊ capital letter (A - Z), small letter (a - z), number (0 - 9), special character ([email protected]#$%^&*<>?)ပါတဲ့ Password ကိုပေးပါ။ ဥပမာ - [email protected] , [email protected]@r
Password မှာ capital letter, small letter, number, special character များ ပါဝင်ပြီး စာလုံးအရေအတွက်များပါက password ကို program တွေသုံးပြီး hack ဖို့ ပိုမိုခက်ခဲပါတယ်။ hack ဖို့ အတွက် အချိန်ပိုမို ယူရပါတယ်။
Facebook နဲ့ Gmail password တွေကို အတူတူထားတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ကိုယ် facebook account ဖွင့်ထားတဲ့ e-mail က gmail မဟုတ်တဲ့ အခြား e-mail ဖြစ်ခဲ့ရင် Facebook နဲ့ Gmail password တွေကို မတူအောင်ထားပါ။
Android အသုံးပြုနေသူ ဖြစ်ခဲ့ရင် Android က password များကို Chrome browser ထဲမှာ မှတ်သားတတ်တဲ့ အတွက် Gmail password ကိုလည်း လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ password ထားပြီး Two-Step Verification (Two-Factor Authentication) ကို အသုံးပြုပါ။ Two-Step Verification (Two-Factor Authentication) ကို 2FA လို့လည်း အတိုကောက် သုံးနိုင်းပါတယ်။ facebook, Gmail တင်မက ကိုယ်အသုံးပြုသမျှ account တွေကို Two-Step Verification (Two-Factor Authentication) setup လုပ်ပြီး အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
PC မှာ Chrome Browser အသုံးပြုသူ ဖြစ်ပါကလည်း chrome browser က password ကို မှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်။ Password တွေ မှတ်သားထားခြင်း ရှိ မရှိကို ကိုယ် အသုံးပြုနေတဲ့ Gmail ကို login ဝင်ထားတဲ့ browser ကနေ https://passwords.google.com/ ကို သွားရောက် စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ Chrome Browser မှာ ကိုယ် Save ထားမိတဲ့ password တွေကို အဲဒီမှာ ပြန်ကြည့် လို့ရပါတယ်၊ ဖျက်လို့ရပါတယ်။
ကိုယ့် account hack ခံရတယ်လို့ သံသယရှိရင် Where you’re logged in မှာ ဝင်စစ်ပြီး မလိုတဲ့ device တွေထဲမှာ ဝင်ထားတဲ့ fb account များကို log out လုပ်ပါ။
Menu > Settings > Security and Login > Where you’re logged in > See all
ဝင်ထားတဲ့ ဖုန်း model, တည်နေရာ, Facebook app ဘေးမှာ Acitive Now လို့ပြနေတာက လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Device ပါ။
ကိုယ်အရင်က ဝင်ထားတဲ့ Device တွေ ဆက်လက်အသုံး မပြုတော့ Device တစ်ခုခုထဲကနေ facebook ကို log out လုပ်ချင်ရင် အဲဒီ Device ဘေးက အစက်ပြောက် ၃-ပြောက်ကို နှိပ်ပြီး Log Out ကို နှိပ်ပါ။
ဝင်ထားတဲ့ Device မှန်သမျှ အကုန်လုံးကနေ Log Out လုပ်ချင်ရင်တော့ အောက်ဆုံးထိသွားပြီး LOG OUT OF ALL SESSIONS ကို နှိပ်ပါ။
E-mail/phone no. နဲ့ password တင်မက ပိုမို လုံခြုံစိတ်ချရအောင် Two-Factor Authentication ကို On ထားပါ။
Menu > Settings > Security and Login > Use two-factor Authentication